Black Magic: Pro Vs Noob
Posted by Black Magic | Posted in Dota , ဟာသများ | Posted on 1:55 AM
အခု မှ ပြန်စရေးရမှာဆိုတော့ ဘာရေးရမလည်း မသိလို့ သူများဟာ ကူးချပေးလိုက်တယ်ဗျာ.. :P
MM Dota က Bro တစ်ယောက်ရေးထားတာကို Share ထားတာပါ..၊
ကဲ ... ဒီဟာကတော့ ဟာသလေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် တစ်ခါတစ်လေ မှားမှန်းမသိပဲ မှားခဲ့တာလေးတွေကို ဟာသအဖြစ်နဲ့ ရေးထားတာလေးပါ။ ကျွန်တော့်ဘာသာ ရေးထားတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာ ပြန်ထားတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရယ်ရပါတယ်။ ပရို နဲ့ ကဒတ် ကွာခြားချက်များ ပေါ့ဗျာ.။
(english လိုတော့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးဆိုရင် newbie လို့ ခေါ်ပီး ရိုင်းရိုင်းပြောရင်တော့ Noob ပေါ့ဗျာ။)
MMDG မှ ညီအစ်ကိုများအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ... (^_^)
Noob ။ ။ ငါလုပ်ချင်တာ ငါလုပ်မယ်။
Pro ။ ။ ငါလုပ်သင့်တာ ငါလုပ်မယ်။
Noob ။ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ့ အစီအစဉ်တွေ ပေါ်တင်လုပ်မှာပဲ။
Pro ။ ။ ငါ့ရဲ့ အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် ဟာကွက်မရှိတဲ့ အချိန်ထိရောက်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်မယ်။
Noob ။ ။ ဒီကောင်တွေက ကြမ်းတယ်။ အဲ့ဒီ့တော့ Pick တယ်ကွာ။ ဒါပဲ!!!
Pro ။ ။ ဒီကောင်တွေကို ယူထားရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကောင်တွေမှာ အကောင်းဆုံး combo flow တွေရှိတယ်။ တစ်ဖက် carry ကို counter လုပ်နိုင်တယ်။
Noob ။ ။ တောက်! ငါသေသွားပီ။ ငါ့ဘက်ကကောင်တွေကို အပြစ်ပြောဖို့ အချိန်ပဲ။ " !@#$% ပဲကွာ.. မင်းတို့ @#$ သုံးကို မကျဘူး " !!
Pro ။ ။ ဟူးးးး သေသွားပီ။ နောက်တစ်ခါမှာ ဒီထက်ပိုပီး ဂရုစိုက်မှဖြစ်မယ်။
Noob ။ ။ ဟာ! ဟိုဘက်ကကောင်တွေက ကြမ်းတယ်ဟ။ တော်ပီ။ ဒီပွဲကထွက်ပီး ငါ့ထက်ပိန်းတဲ့ကောင်တွေနဲ့ပဲ ရှာဆော့တော့မယ်။
Pro ။ ။ ငါ့ထက် အများကြီးကြမ်းတယ်။ သူတို့ကစားကွက်တွေကို သင်ယူရမယ်။ ပီးတော့ အတက်နိုင်ဆုံး နဲ့ အမြန်ဆုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားပီးဆော့မယ်။
Noob ။ ။ ခွီးပဲ! ငါ့နောက်မှာ ganker တွေလိုက်လာပီဟ။ သွေးကန်ကို right-click ထောက်ပီးဆုတောင်းမှပဲ။ ဘုရား ဘုရား.... မသေပါစေနဲ့ မသေပါစေနဲ့ မသေပါစေနဲ့ (ချွေးပြန်လာပီ)။
Pro ။ ။ Ganker တွေ လိုက်လာပီ။ သစ်ပင်ဘက်ကို မျှားခေါ်လှည့်ပတ်ပီးပြေးမယ်။ ငါ့ရဲ့ အသက်ရှင်ဖို့ chance များလာမှာပဲ။ ပိုက်ဆံတွေ အလကားမဖြစ်အောင် item တွေ ၀ယ်ထားရမယ်။ ဒီအချိန်အတွင်းမှာ ငါ့ရဲ့ allies တွေရောက်လာဖို့ အချိန်ဆွဲသင့်သလောက်ဆွဲထားမယ်။
(spell သုံးပီး hero အမြန် kill တဲ့ nuker အဖွဲ့ကို ganker လို့ ခေါ်ပါတယ်)
Noob ။ ။ ဟာ! ရန်သူတွေ လမ်းတိုးလာပီဟ။ သူတို့ ကြည့်ရတာ တော်တော်ကြမ်းမယ့်ပုံပဲ။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။ မထူးဘူး ချကွာာာာာာာာ !!! တိန် ! ငါ တေတွားပီ ။
Pro ။ ။ ဟိုဘက်အသင်းက လမ်းတိုးလာပီ။ သူတို့ အသင်းရဲ့ creep ကို ဦးတည်ပီးသတ်နိုင်မယ့် နေရာကောင်းကို ယူထားမယ်။ ငါ့ allies တွေ အားလုံး နေရာယူပီးတဲ့အထိ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ရင်း creep ရှင်းမယ်။
Noob ။ ။ ဟိုကောင် သွေးတစ်စက်လေးနဲ့ လာကဲနေတယ်။ ခလုတ်တိုက်ရင်တောင် သေမယ့် sexy သွေးလေး။ တောက် ! ငါ့မှာ mana လဲ မကျန်တော့ဘူး။ လိုက်ကွာ! ရှုပ်တယ်။ အဲ့ဒီ့ကောင် ကဒတ်ပဲဖြစ်ရမယ်။ အသေလိုက်သတ်ပေးလိုက်မယ်။ XD
Pro ။ ။ အဲဒီ့ သေခါနီးကောင်လေးကို ဖြစ်နိုင်ချေမရှိပဲ လိုက်သတ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ ငါ့ကိုယ်ငါ အန္တရာယ် တွင်းထဲပို့သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ စိတ်လျော့။
Noob ။ ။ ဟာာာာ! ငါတို့ ဝင်ချလိုက်တိုင်း ဟိုကောင်တွေက fall သွားတယ်။ တောက် ! တင်းလာပီ။ မတရားဘူးကွာ။ hack ထားတဲ့ မြေပုံကြီး ... !!!
Pro ။ ။ ဟိုဘက်က ob ထောင်ထားတာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ မဟုတ်ရင် တော်တော်ကို alert ဖြစ်တဲ့ရန်သူပဲ။ သတိထားမှ!!! sentry ဝယ်ပီး ob တွေ ချိူးမယ်။ အဲ့ဒါမှ ဒီကောင့်ကိုသတ်ဖို့ အဆင်ပြေတော့မယ်။
Noob ။ ။ Battle ဖြစ်နေပီဟ။ ငါ့ရှေ့မှာလဲ စားစရာ creep တွေ အများကြီးပဲ။ ဟဲဟဲ... portal မဝယ်ရသေးဘူးလို့ အကြောင်းပြလိုက်မယ်... ဟိဟိ။
Pro ။ ။ ငါ့ကောင်တွေနဲ့ ဟိုဘက်နဲ့ battle ဖြစ်တော့မယ်။ ဒါဟာ portal ကို သုံးဖို့ အသင့်လျော်ဆုံး အချိန်ပဲ။
Noob ။ ။ ဘာ!!! ob ! ဟုတ်လား? မဝယ်ဘူးကွာ။ ပိုက်ဆံ ၂၀၀ အလကား ဆုံးတယ် ... X-(
Pro ။ ။ သေပီး ၂၀၀ ကုန်သွားတာထက်စာရင် ၂၀၀ ရတာနဲ့ ob ၀ယ်ထားမယ်။ ob cooldown မြန်မြန်ပြန်တက်တော့ အသင်းအတွက် အကျိူးရှိတယ်။
Noob ။ ။ stun ခံရတယ်။ stun ပီးရင်း stun ခံနေရတယ်။ တောက်! ခွီးပဲ! ဒီလမ်းမှာ အသက်ရှင်ဖို့ နည်းလမ်းမရှိတော့ဘူး ... T_T။
Pro ။ ။ ဒီလမ်းက ကောင်တွေရဲ့ combo ကြီးကို ငါသိနေတာပဲ။ သူတို့က ဒီလို combo ကို သုံးမှတော့ ငါလဲ အဲ့ဒီ combo ကို counter လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ငါ ကြိုတင်တွေးတောထားမယ်။
Noob ။ ။ hero များများချိန်စားရမယ်။ ဒါမှ ငါနာမည်ကြီးမှာ ... ။
Pro ။ ။ ငါကိုင်ထားတာ supporter ။ ငါစားလိုက်တာထက် ငါ့ carry ကို ပေးကျွေးလိုက်ရင် သူ့အတွက် ပိုက်ဆံပိုရတော့ တစ်သင်းလုံးအကျိူးရှိတယ်။
Noob ။ ။ တောက်!!! စောင့်နေရတာ တင်းလာပီ။ အချိန်အလကား ကုန်တယ်ကွာ။ စိတ်မရှည်တော့ဘူး။ သူ့နောက်မှာ tower ရှိလဲ ၀င်သတ်မယ်ကွာ။ သေပေတော့ ...။
Pro ။ ။ အခွင့်မသာမချင်း ပေတေပီးစောင့်မယ်။ မဟုတ်ရင် ငါ့ရဲ့ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီးက အကျိူးမရှိပဲ အလကားသေသွားရလိမ့်မယ်။
Noob ။ ။ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ အချိန်ပဲဟေ့။ ဟာ ! Bristleback ကြီးပါလား။ -ီးကွာာာာာာာာာာာ !!!
Pro ။ ။ သူတို့ဘက်က tanker နဲ့ မျှားနေပီ။ သတိထားရတော့မယ်။ အဲ့ဒီ tanker ရဲ့နောက်ကွယ်က အန္တရာယ်ရှိတဲ့ hero ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို သတိထားရတော့မယ်။ Damage နည်းနည်းနဲ့ hp များများ hero ကိုအရင်သတ်ဖို့ ကြိုးစားတာ ညဏ်မရှိသလိုဖြစ်သွားမယ်။
Noob ။ ။ င့ါရန်သူတွေက အကုန် hitter တွေ ချည်းပဲ။ ငါကလဲ BKB ဆက်ဖို့ စဉ်းစားထားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ShowT က အဲ့ဒီရန်သူ့ hero နဲ့ ချတုန်းက BKB ဆက်တယ်လေ။ ရှုပ်တယ်။ ပီးအောင် ဆက်မယ်။
Pro ။ ။ armor တက်တဲ့ item ဝယ်လိုက်တာ ပိုအဆင်ပြေမယ်။ ဒါမှ သူ့ရဲ့ damage hit ကို လျော့နိုင်မယ်။ BKB ၀ယ်တာ ပိုက်ဆံ ၃၉၀၀ ကို အလကားဆုံးရှူံးစေမယ်။ hp တက်တဲ့ item လေးတွေ ဝယ်ရမယ်။
(ShowT ကတော့ အားလုံးသိတဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် G7 က pro ရဲ့ နာမည်ပါ။ နာမည်ကို အစားထိုးသုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
ဒီ စာတမ်းလေးက ဟာသလေး ဆိုပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် အကျိူးလဲ ရှိတဲ့ စာတမ်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးလဲ ခံစားမိမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ ဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိတာ အားလုံးလဲအသိပါ။ သဘောကတော့ "ဆေးထိုးတဲ့ကောင်တွေ" ပေါ့ဗျာ။ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို့ ဒိုတာစစခုတ်ချင်း beginner ဘဝမှာ ဒီလိုမျိူးအတွေးတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ဝန်ခံစရာမလိုအောင် မှန်ခဲ့မယ်လို့ပြောရဲပါတယ်။ အခုတော့ ရယ်စရာကြီးပေါ့ဗျာ.... XD
နောက်လဲ အကျိူးရှိလောက်မယ့် post လေးတွေ တင်ပါဦးမယ်။ အနည်းငယ်လေး အကျိူးရှိတယ်ဆိုရင်တောင် ပင်ပန်းရကျိူးနပ်ပါပီဗျာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (^_^)
*** ပျော်ရွှင်စရာနေ့များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ **